4 imibhalo kanye nezincwadi ukuqonda minimalism | Bezzia
4 imibhalo kanye nezincwadi ukuqonda minimalism
UMaria vazquez | 07/07/2021 10:00 | Indlela yokuphila
Umqondo we-minimalism wasetshenziselwa okokuqala isazi sefilosofi saseBrithani uRichard Wollheim ngo-1965 ukuchaza umkhuba wobuciko owavela njengokuphikisana nobuciko be-pop. Leli gama nokho lidilize izithiyo zobuciko chaza indlela yokuphila lokho kusimema ukuthi sizihlubule ezintweni eseqile sizinciphisele kokusemqoka.
Abangane abaningi, umthwalo wemfanelo omningi, imali ethe xaxa, izinto eziningi ezibonakalayo ... I-Minimalism iphikisana nakho konke lapho isigqi samanje sempilo sibonakala sisiphoqa ngaso ukuma impilo elula futhi egcwele. Impilo amadokhumenti nezincwadi ezilandelayo ezisisiza ukuba sikuqonde kangcono.
1 Minimalism: izinto ezibalulekile
3 Isisekelo esincane
4 Hhayi nonke noma ngakho konke namuhla
Minimalism: izinto ezibalulekile
"I-Minimalismo" idlala ifilimu UJoshua Fields Millburn noRyan Nicodemus, izazi ze-ideologists zenhlangano encane, abafundisi, abaphathi bewebhu theminimalists.com nababhali bezincwadi eziningana.
Idokhumentari ekhombisa i- izinzuzo zokuncane zingaphezulu Ngobufakazi babantu abamelene nokusetshenziswa okungalawuleki eMelika Izwe.
I-Minimalism isandiso saleyo ncwadi: Konke Okusalayo: Isikhumbuzi esenziwe ngabakwaMinimalists, esingakahunyushelwa olimini lwesiSpanish. Kuthiwani uma yonke into owake wayifuna kwakungeyona le nto oyifunayo ngempela? Yilokho okwenzekile kubaphikisi bayo kanye nombuzo obekwe endleleni yabo njengempendulo futhi ngokwemvelo, ubuncane.
Luyathokozisa uhambo oludabula amazwekazi ama-5 lufuna okhiye benjabulo; sendlela yokuthola ibhalansi phakathi kokufuna imali, impumelelo nesimo senhlalo, kanye nezidingo zethu zobudlelwano obakhayo, ezempilo kanye nokwaneliseka komuntu siqu. Ngezindaba zokuphila zabantu abajabule kanye nezisekelo zePositive Psychology (isayensi yamanje ephenya ngenhlalonhle), u- "Happy" uzama ukukhombisa ukuthi singakwenza kanjani kuzuzwe impilo ephelele, enempilo futhi ejabule kakhudlwana.
Buyisa isikhala sakho uthokozele impilo yakho. Isikhathi sethu silinganiselwe futhi sifuna ukuba sibe sezingeni. Sifuna ukulinganisela nokuzola, kepha usuku nosuku futhi ukunqwabelana kwezinto kungaholela ezimeni yengcindezi esivimbela ukuthi sijabulele impilo ezolile nejabulisayo.
ULucia Terol, ochwepheshe ku-minimalism nokuhleleka, wabelana ngokuhlangenwe nakho kwakhe nenqwaba yezeluleko ezisebenzayo ezigxile ekufinyeleleni ukulinganisela kwengqondo nomzimba. Ku-Minimalist Essence uzothola imikhuba enempilo okulula ukuyenza, eyenziwe kwifilosofi yeminimalism, eyenzelwe ukukusiza ukuthi ujabulele futhi ushiye ukunganeliseki nokuncika ngemuva.
Akuqukethe ukuba nenani elithile lezinto kepha ngokuhlala nalezo zinto, imisebenzi nobudlelwano obukhombisa ubuhlakani bakho, amadayimane akho. Ukukhanyisa umthwalo wakho kuyo yonke into, exhunywe nenkululeko yokuhamba, isenzo kanye nesinqumo. Ukuzwa ubhaka wakho njengomlingani hhayi njengomthwalo. Ingabe usukulungele ukuphila okugculisayo?
Hhayi nonke noma ngakho konke namuhla
Este akuyona incwadi yokuphatha isikhathi ongayisebenzisa. Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi okwenza ukuthi usebenzise umkhiqizo wakho akukhona ukusetshenziswa kwesikhathi okuhle kepha intando yakho? Ngale ndlela yokuphatha, amathuluzi amathathu azo-oda impilo yakho ngaphansi kwemibuzo emithathu elula. Ukufunda ukuphatha isikhathi akuyona into eza kuqala, kepha kunikeza izwi injongo yakho ebalulekile.
Ngaphansi kwendlela ye-minimalism, Ngiphakamisa uhlelo lokusebenza empilweni yakho olusukela ekunciphiseni ikhabethe lakho, ukuthuthukisa indlela odla ngayo, ukwenza lula ikhaya lakho nokwakha ubudlelwane obuqinile nalabo ababaluleke ngempela empilweni yakho.
Ngabe uke wabona noma wafunda noma imuphi wale mibhalo noma izincwadi? Angidingi ukufunda nonke, noma yonke into namuhla. Ngibe nenhlanhla yokubona iMinimalism kudala futhi angikwazi ukuyeka ukuyincoma. Ngokuqondene noLucia Terol, ngingakuqinisekisa ukuthi izinhlelo zakhe ziyasebenza uma ufuna ukuthi zisebenze.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » 4 imibhalo kanye nezincwadi ukuqonda minimalism
Ungasika kanjani amabhangqa avulekile
Izinto ezi-5 ezingavunyelwe ebudlelwaneni